हिमाल चढ्ने क्रममा हातका सबै औंला गु’मा’एका एक कोरियनले विश्वका अग्ला १४ हिमाल चढेर बनाए किर्तिमान – Eps Sathi
हिमाल चढ्ने क्रममा हातका सबै औंला गु’मा’एका एक कोरियनले विश्वका अग्ला १४ हिमाल चढेर बनाए किर्तिमान
July 19, 2021 839
हिमाल आरो ह]णकै क्रममा हिउँले खा’एर आफ्ना हा’तका ‍औं’लाहरु गु’माएका एक दक्षिण कोरियाली नागरिकले विश्वका अ’ग्ला १४ वटै हिमाल आ रोहरण गरी नयाँ कि’र्तिमान ब’नाएका छन। अ’पा’ङ्ग’ता भएका व्यक्तिले विश्वका अग्ला १४ हिमाल आ’रोहरण गर्ने उनि नै विश्व’कै पहिलो ब्यक्ति बनेका छन।
किम होङ बिन पाकिस्तानको काराकोरम रे’न्जमा रहेको ८ हजार ४७ मिटर उचाइको ब्रोड पिकको चु’चुरोमा आइतबार दिउँदो करिब ५ बजे पुगेका थिए। उनले विश्वका अ’ग्ला १४ वटै हिमाल सफल आ रोहरण गरेको जानकारी दक्षिण पश्चिम ग्वाङ्जु शहरमा अवस्थित ग्वाङ्जु अल्पाइन फे डे’रेशनले जानकारी दिएको छ।
करिब ३० बर्ष अगाडी उनले हिमाल च’ढ्ने क्र ममा अत्या’धिक ची’सोका का’रण आफ्ना औंलाहरु गु’माएका थिए। किम होङ बिन अहिले ५७ बर्षका भएका छन। विश्वका अ’ग्ला १४ वटै हिमाल आरो’हण गर्ने किम विश्वकै ४४ ‍‍औं तथा दक्षिण कोरियाको सातौं ब्यक्ति बन्न पुगेका छन। केहि समय अघि किम सहितको ६ जना पर्वतारो’हीको समूह जुन १४ मा हिमाल आ’रोहरणका लागि पाकिस्तान प्रस्था’न गरेको थियो। उनिहरुले ब्रोड पिकको ४ हजार ८ सय मिटर उचाइमा बे’स क्या’म्प ख’डा गरेका थिए। सुरुमा ख’राब’ मौ’षमका का’रण हिमाल आरो’हणमा केहि स’म’स्या भो’गेतापनि किमको टिम ४ दिनपछि हिमालको चु’चुरोमा पुग्न स’फल भएको थियो।
यो हिमाल आरो’हणको यो’जना किमको टिमले गत बर्ष नै बनाएको भएतापनि को’रो’नाको कारण १ बर्षपछि उनिहरुको योज’नाले साकार रु’प लि’एको छ। सन १९९१ मा उत्तर अमेरिकामा रहेको ६ हजार १ सय ९४ मिटर अग्लो माउण्ट मेकिन्ले हिमाल आरोहर’णका क्रममा अ’त्या’धिक चि’सोका कार’ण किमले आफ्नो दु बै हा’तका १० वटै औंलाहरु गु’माउ’न पुगेका थिए। तर उनलाई यसले छे’क्न स’केन र विश्वकै अ’ग्ला १४ वटै हिमालको उनले सफल आ’रोहण गर्न पुगेका छन।
Prevकोरियाली यु’ध्दमा योङसानमा अमेरीकी से’नाले सउल छिर्न यसरी रोकेको थियो उत्तर कोरियाली से’नालाई
Nextदक्षिण कोरियाले भिजा सकि’न लागेका ९० हजार विदेशीको भिजा ३ महिना थपिदिने
जिडीपी र्याङ्किङमा कोरिया टप १० मा, रसिया, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया जस्ता देशलाई प’छार्न सफल
कोरियामा भोलीबाट खोप अभियान सुरु हुँदै, नेपालीहरुले कुन चरणमा पाउलान खोप?
साहस उर्जा कम्पनीको आइपिओ आउँदै, हेरौं कहिले आउँदैछ? कस्तो छ कम्पनी?
हाइपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने नेपालीलाई जहाँ भए पनि पक्राउ गरिने (4499)
इपिएस मार्फत कोरिया आएको १ महिना नबित्तै एक नेपाली युवालाई कोरियाले गर्यो देश निकाला (3509)